श्रीमती भर्सेस पूर्व प्रेमिका :: Setopati
कमला अधिकारी असोज ४
'फेरि तँ त्यही भिखारीकी छोरीलाई भेटेर आइस्? हाम्रो इज्जत कति छ थाहा छैन तँलाई? त्योसँग बिहे गरिस् भने त मलाई आमा नभने नि हुन्छ तैंले बुझिस्! हाम्रो खान्दानको इज्जत माटामै मिलाउनी भइस् हैन?' आमाको रिस घोलिएको बोली चुपचाप सुनिरहेको थियो रविन।
'खाना खान आउनुस्' भनी भित्रबाट आफ्नी भाउजूले रविनलाई बोलाउँछिन्। ऊ लुरुलुरु भान्साकोठाभित्र जान्छ। नबोली नबोली खाना खाएर आफ्नो अफिसतर्फ लाग्छ। सेतो कमिज, आइरन लगाएर धार परेको पाइन्ट, लेदरको टलक्क टल्केको जुत्ता, कालो चश्मा लगाएको, उम्दा व्यक्तित्व भेटिन्थ्यो उसमा।
रविनले मीठो अनि सुमधुर आवाजमा केही बोल्ने कोशिस गर्छ, 'आहा जस्मिन आज त निकै साइत परेको छ नि मलाई तिम्रो हरियो घाँसको डोकोले।'
चिया पसलकी आन्टीलाई सोध्यो, 'को हुन् आन्टी यी नानी?'
'रविन, ए यो नानी... यिनको परिवार गोरखाबाट सरेर आएका हुन्। भुइँचालोले घर खाएपछि ओत खोज्दै आ’का थिए। तल जिम्माल बाको घर लिएर बसेका छन्। तीन-चार वर्ष भयो। यिनी यहीँको क्याम्पसमा पढ्छिन्। नाम जस्मिन हो। पढाइ पनि राम्रो छ। रूप आनीबानीको त कुरै नगरौं। यस्ती भए पो बल्ल छोरी।'
आमाले घरअगाडिको मन्दिरमा बसेर कर्कलाको अचार बनाउँदै भन्छिन्, 'ठूलेको ससुरालीले पनि हाम्रो कुलघरानाको राम्रोसँग इज्जत राखिदिए। अब तेरो पालो। कान्छी बुहारी अझ धुमधामसँग भित्र्याउने मन छ। हेर है इज्जत राखिदिने ठाउँमा जानुपर्छ।'
'कान्छा मुखिया कहिले आउनुभयो?' जस्मिनको आडैका रहेको मान्छेले सोध्यो। नचिनेको मान्छेले चिरपरिचितले झैं बोलाउँदा रविन दङ्ग पर्‍यो।
'हजुरले मलाई चिन्नुहुन्छ र?'
'किन नचिन्नु नि। हजुर लाहुरे साइँलाको छोरा होइन र?'
'हजुरको बुवा र हजुरको अनुहार काटेकुटे मिल्ने रैछ।'
'अनि लसुन लगाउन लाग्नुभा?'
'यो चाहिँ मेरो छोरी जस्मिन। आज छोरीको क्याम्पसमा बिदा रैछ। त्यही मौका छोपेको। अरु बेला यिनीहरूसँग काम लिन पाइन्न। यस्तै मौका कुर्नुपर्छ के गर्ने?'
एकछिन पछि विस्तारै सोध्छ, 'जस्मिन तिम्रो पढाइ कहाँ पुग्यो? सुनेको थिएँ पढाइ निकै राम्रो छ।'
जस्मिनले आँखामाथि नउठाई बोल्छे, 'ब्याचलर फोर्थ इयर।'
'कुन फ्याकल्टी हो नि?'
ऊ अलि ढुक्क भएर बोल्छे 'कमर्स'।
'अनि मास्टर्स कहाँबाट गर्ने सोच छ त तिम्रो?'
'अब यहाँ त छैन। त्यसपछि थाहा छैन पढ्ने कि छोड्ने? अब पाए केही जागिर गर्ने भनेको।'
'खाए, लाएको सरकारी जागिरे ठिटो देखेकी अनि झुत्ति परेर लागिछे...,' रविनकी आमा नानाथरी फलाक्न थाल्छिन्।
'त्यो दुई कौडीकी केटीसँग जीवन बिताउन सक्छु भन्ने हिम्मत कसरी गरिस् तैंले? तलाईं पढाएर ठूलो मान्छे बनाएको यही गर्न हो? कस्तो ठाउँमा लगेर पढाएछु यसलाई? समाजको अगाडि नाक मुखै नदेखाए भो अब त,' बुवा यति भन्दै पस्केको भात हुत्याएर खाना नखाई ड्याम्म ढोका लगाएर सुत्छन्।
दाइ भन्छ, 'केही बिग्रेको छैन। अझै एकपटक सोच। हामीले भनेको केटीसँग बिहे गरिस् भने तेरो भलाइ हुन्छ।'
तिहारका बेला थियो। जस्मिन लामो समयपछि माइती आएकी थिई। उसकी सानी सुन्दर छोरी पनि थिई। रविनले 'चिया खाएर जाऊ न' भनी बिन्ती गर्छ।
आमाले चिया ल्याएर दिन्छिन् र भन्छिन्, 'जस्मिन तिमीलाई हाम्रो छोरो रविनले धेरै माया गर्थ्यो। मैले गर्दा उसले तिमीलाई गुमाउनु पर्‍यो। उसको जीवनमा तिमी भैदेको भए सुखमय हुने रहेछ। मेरो घमण्डको परिणामको सजाय हामी सबैले भोग्नुपर्‍या छ।'
पटुकाबाट पचासको नोट निकालेर जस्मिनकी छोरीको हातमा राख्दै भन्छिन्, 'ममी जस्तै जागिरे हुनू छोरी।'
'के अचम्म मानेर हेर्‍या नि?'
'आफ्नो बुढीलाई नहेरेर कसलाई हेर्ने त?'
'कसलाई हेर्ने? जस्मिनलाई हेरे भै गो नि।'
'जस्मिन त मेरो साथी हो। लाखौंमध्येको एक उत्कृष्ट साथी।'
'होइछ, तपाईंको त पहिलेकी हो नि खुब माया लाग्दो हो है।'
'मलाई मात्र होइन उसलाई सबैले माया गर्छन्। ऊ छ नै त्यस्ती।'
रविनले पनि महशुस गर्छ, आफ्नो बिग्रिसकेको घर पूर्वप्रेमिकाकै कारण सुध्रियो। त्यसैले रविन आफ्नो पहिलो रोजाइलाई सधैं स्वीकार गर्थ्यो।